Guqula igama libe jpg: iinkqubo eziza kukunceda ukufezekisa | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Kukho amaxesha apho kuya kufuneka wenze i-infographic, okanye ipowusta kwaye, kuba awubenzi kakuhle abahleli bemifanekiso, ukhetha iLizwi ukuyenza. Ngoku xa ufuna ukuguqula iLizwi libe yiJPG, izinto ziyatshintsha, kuba akukho lula ukuyenza (ayikuniki ukhetho lokuguqula).
Ngethamsanqa, sinokukunceda kuloo nto, kuba zininzi iinkqubo eziguqula uxwebhu lokubhaliweyo, njengeLizwi, lube yifayile yomfanekiso, njengeJPG. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ungaguqula njani iLizwi libe yiJPG? Ewe, apha ngezantsi sikunika ezinye iindlela zokufezekisa iziphumo ozijongileyo.
1 Yintoni uxwebhu lweLizwi
2 Yintoni ifayile yeJPG
3 Iinkqubo zokuguqula iLizwi libe yiJPG
3.4 Guqula kwi-Intanethi
3.5 Guqula iLizwi libe yiJPG usebenzisa iinkqubo zokuhlela imifanekiso
4 Guqula iLizwi libe yiJPG kunye nezinye iinkqubo
Yintoni i Uxwebhu olusuka igama
ILizwi yinto ebizwa ngokuba yiyo, ishunqulelwe ku Uxwebhu lweMicrosoft Word. Kungoko ke sisiphumo esifunyenwe xa kusenziwa iprosesa yamagama, enye yezona zisetyenziswa kakhulu namhlanje.
Inkqubo yeLizwi yazalwa ngo-1981, nge-IBM. Kwaye kwasebenza ukucacisa isicatshulwa kwikhompyuter kwinqanaba elilula (nangona, ngokuhamba kwexesha, oku bekunyuka de kube yile nto uyazi namhlanje). Ngapha koko, ngoku, phakathi kwemisebenzi onokuyenza ngeLizwi zezi:
Bhala izicatshulwa, kunye ne-monographs, amanqaku a-odolwe ... ukubanakho ukukhetha ifonti, ubungakanani, isibindi, italic, ukrozo ...
Faka imifanekiso encedisa ekubonakaliseni ukucebisa okubhaliweyo.
Yenza iitafile zokucebisa ulwazi okanye uluhlele ukuze lubonakale lu-odolwe ngakumbi.
Nxibelelana nezinye iinkqubo kwiOfisi Suite, enje nge-Excel (idatha yokuncamathisela) okanye iPowertPoint.
Ngamafutshane, sithetha nge isixhobo esisetyenziselwa ukwenza isicatshulwa, kodwa inokusetyenziselwa ukufaka iitafile kunye nemifanekiso kwaye uyihlele kwinqanaba elisisiseko.
Iziphumo zigcinwa kuxwebhu lokubhaliweyo, iLizwi, eliza kuba ne-extension doc okanye i-docx. Nangona kunjalo, le nkqubo ngokwayo iyakuvumela ukuba uyigcine kwezinye iifom ezinje ngePDF, i-HTML, isicatshulwa esityebileyo ... Kodwa hayi njengeJPG.
Yintoni ifayile yeJPG
Kwelinye icala, sinayo ifayile yeJPG. Okanye yintoni enye, a AmaQela eNgcali yamaFoto, ekwabizwa ngokuba yiJPEG. Yifomathi yomfanekiso enikezela umgangatho owamkelekileyo womfanekiso (ngoxinzelelo).
Xa kuthelekiswa noku kungasentla, sithetha ngezinto ezahlukeneyo, kuba kule meko iJPG ijolise kumfanekiso, hayi kwisicatshulwa. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba kwiJPG akunakubakho okubhaliweyo, ngokuchaseneyo, kunokuvela.
Nangona kunjalo, ingaphezulu kwefayile ebonakalayo, kuba ingumfanekiso oya kugcina umgangatho owaneleyo oya kuxhomekeka kwinkqubo oyisebenzisayo ukuphulukana nomgangatho ongaphezulu okanye ongaphantsi. Ukongeza, inokwabelwana ngayo kunxibelelwano lwasentlalweni, kwaye inokujongwa, ngokungafaniyo neLizwi, apho kufanelekileyo ukuba nenkqubo ehambelanayo yokuyivula (ukuba awunayo, ngekhe ukwazi ukubona ukuba yintoni leyo uxwebhu luqukethe).
Iinkqubo zokuguqula iLizwi libe yiJPG
Ngaphandle kwalonto ILizwi kunye neJPG zizinto ezimbini ezahlukeneyo, Umahluko omkhulu phakathi kwezi fomathi zombini ngokungathandabuzekiyo kukubona kwabo. Ngelixa unokuvula iJPG phantse ngokuzenzekelayo (ngaphandle kwesidingo sokufaka iinkqubo), kwimeko yeLizwi ngokufanayo akunjalo; Inkqubo iyimfuneko ukufikelela kulwazi (imizobo, isicatshulwa, umfanekiso ...) ongaphakathi.
Kungenxa yoko, uninzi lufuna ukuguqula iLizwi libe yiJPG, kwaye kuba iinkqubo ngokwazo azikuvumeli oko, Siza kuphakamisa izixhobo ezinokukunceda ufezekise esi siphumo.
Eli phepha lewebhu alizukunceda kuphela ukuguqula iLizwi libe yiJPG, kodwa unokukhetha ezinye (njengeJPG ukuya kwiPDF). Ilula kakhulu ukuyisebenzisa kuba kufuneka ucofe iqhosha lokulayisha kwaye ukhethe ifayile yeLizwi ofuna ukuyiguqula.
Inenzuzo yokuba ungalayisha ezininzi ngexesha, ukuya kuthi ga kwi-20.
Kuya kufuneka ube nomonde kancinci kuzo zonke iifayile eziza kulayishwa kwaye ugqibe inkqubo yokuguqula ukhuphele iziphumo. Ukuba ulayisha ezininzi, unokuzikhuphela kamva kwi-zip.
Sukukhohliswa ligama, unokuguqula ngokulula iLizwi libe yiJPG. Ngapha koko, esi sixhobo asiguquli kuphela uxwebhu lokubhaliweyo lube ngumfanekiso, kodwa kananjalo ungakhetha ukunikezelwa kwe-DPI, umgangatho weJPG kunye nokwenza emva kokuguqulwa.
Olunye ukhetho kwi-Intanethi lokuguqula iLizwi libe yiJPG yile. Ukwenza oku, ungalayisha amaxwebhu egama ofuna ukuwaguqula kwaye ulinde imizuzwana embalwa ukuze kwenziwe iziphumo.
Ngokungafaniyo neyangaphambili, apha ayiniki iinketho zokuguqula umgangatho weJPG.
Elinye iphepha lewebhu apho uguqula khona iLizwi libe yiJPG, okanye njengoko kubonisiwe, iDOC iye kwiJPG. Uncedo loku kukuba iyakuvumela ukuba wenze uhlengahlengiso olongezelelekileyo, njengomgangatho, ucinezelo lomfanekiso, utshintshe ubungakanani bomfanekiso, umbala, uphucule umfanekiso ngokwawo (malunga nokuyibeka kwimeko yesiqhelo, ukugxila kuyo, ukuphelisa amabala, ukuphinda umise kwakhona ...), ukuseta i-DPI efunekayo, ukusika iipikseli okanye ukuseta umda omnyama nomhlophe.
Guqula iLizwi libe yiJPG usebenzisa iinkqubo zokuhlela imifanekiso
Ukuba awufuni ukufaka amaxwebhu kwi-Intanethi kuba ngalo mzuzu uyeka ukuwalawula kwaye ukhetha ukhetho "olukhuselekileyo" ngakumbi, kungenxa yokuba uxwebhu lubalulekile okanye ngenxa yokuba ungathembi, zininzi iindlela onokukhetha kuzo.
Ukuba unePeyinti, okanye nawuphi na umhleli wesithombe, unokukhetha ukuyisebenzisa ukuguqula iLizwi libe yiJPG. Ewe ngokunjalo, kufuneka "usebenze" kancinci, kuba into ekufuneka uyenzile yile ilandelayo:
Vula uxwebhu lweLizwi ofuna ukwabelana ngalo. Ukuba awuboni yonke into kwiscreen, yiya kuqala kwaye ke uzame ukuyenza ivele ngokupheleleyo.
Ngoku, thabatha umfanekiso weskrini.
Vula ipeyinti okanye inkqubo yokuhlela umfanekiso.
Vula umfanekiso weskrini osithathileyo.
Kuya kufuneka usike indawo oyithandayo kwaye uyigcine njengeJPG.
Guqula iLizwi libe yiJPG kunye nezinye iinkqubo
Olunye ukhetho, olukwi-PC yakho, ngu Sebenzisa iinkqubo zokuguqula. Kule meko, sicebisa oku kulandelayo:
Isiguquli sasimahla seAVS. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye ngokukhawuleza.
I-Docx yasimahla kwiJPG Converter.
Batch iLizwi kuJPG Converter.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Guqula igama libe jpg
I-Trello: isifundo sokwenza kakuhle isixhobo